Slackware 14.2 ကို၎င်း၏ beta ဗားရှင်းတွင်ရနိုင်သည် Linux မှ
Slackware 14.2 ကိုယခု beta ဗားရှင်းတွင်ရနိုင်သည်
the_robertucho | | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ
ရက်အနည်းငယ်အကြာက၏ beta ကိုဗားရှင်း ပျင်းရိ 14.2ဤသည်သည် Linux စကြာ ၀ withinာတွင်တွေ့ရှိနိုင်သောစွမ်းအားအရှိဆုံးနှင့်တည်ငြိမ်သောဖြန့်ဖြူးခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် (၂၃ နှစ်သက်တမ်းရှိသည့်သက်တမ်းရှိပြီး) သက်တမ်းအရင့်ဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Slackware ကိုတီထွင်ပက်ထရစ် Volkerding မှဖန်တီးခဲ့သောအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအသုံးပြုသူများသည်ဤပထမ beta ထုတ်ဝေမှုတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဦး စားပေးကြသည် Slackware Linux 14.2 ပုံမှန် environments ရှိခြင်းအပြင်၎င်း၏ kernel ကိုတစ် ဦး update ကိုအတူပါရှိသည် KDE y Xfceထို့အပြင်၎င်း၏ developer အဖွဲ့သည်အသံဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Pulse အသံနှင့် ALSA အစားထိုး.
ယခု beta version အသစ်သည်လုံခြုံရေးတိုးတက်မှုများနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။ အချို့သော bug များကိုလည်းဖြေရှင်းပြီးသူတို့အာရုံစိုက်နေသည့်အရာသည်ဤ distro ၏ "fluidity" ဖြစ်သည်။
Slackware ကိုတီထွင် ၎င်းသည်ရိုးရှင်းမှုအားဖြင့်အမြဲတမ်းသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည့် distro တစ်ခုဖြစ်သည် (၎င်းသည်၎င်း၏ cover letter ဟုပြောနိုင်သည်), အမြဲတမ်းစတိုင်ကိုသစ္စာရှိသူ UNIXအသုံးပြုသူကိုရရှိစေသောတည်ငြိမ်မှုသည်၎င်းတို့ရွေးချယ်ခြင်းအဆုံးသတ်ပါကအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ KDE ၄.၉ သူတို့နှင့်အတူအန္တာရာယ်ကြပါဘူး plasma5မိမိအရှေးရိုးစွဲသဘောထားကိုအောက်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုပေါ့ပါးသောရွေးချယ်မှုကို ဦး တည်လျှင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည် Xfce 4.12 နှင့်တူသောပြတင်းပေါက်မန်နေဂျာနှင့်အတူကအတူလိုက်ပါ အမည်းရောင်သေတ္တာ, fluxbox ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ကောင်း ပြတင်းပေါက်.
၎င်း၏ kernel ကိုလည်းပြုပြင်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောနောက်ဆုံးပေါ် version သို့ optimized လုပ်သည် 4.4.0 LTS, အ compiler GCC 4.3, Eudev ၃.၁၅, Xorg ၁.၁၄.၀, အ mesa 11.0.8။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအစီအစဉ်များနှင့် tools များအပြင် Firefox ကို 43။ Startup System ကကျန်သေးတယ် sysvinitထင်ရှားသည်မှာ Gentoo ကဲ့သို့သူတို့ systemd ကိုနှောင့်ယှက်ခြင်းမပြုသည်။
ပထမတစ်ချက်မှာထင်ရှားတဲ့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ sound server ကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည် PulseAudioBluetooth နှင့်အသံထုတ်ကုန်များအကြားသို့မဟုတ် HDMI မှတဆင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းများအတွက်လိုက်ဖက်ညီမှုရှိစေရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အရေးကြီးသောအသုံးအဆောင်ဖြစ်သည်။
စပ်စုထက်ပိုပြီးအရာတစ်ခုခုသည် Slackware ကိုတီထွင် ၎င်းကို live mode တွင်မဖြန့်ဝေသော်လည်း၎င်းကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်အလယ်အလတ်တန်းစား Linux သုံးစွဲသူအတွက်အလွန်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိသော်လည်းသင်ပြသနာများကိုရှောင်ရှားရန်သင့်လမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာခြင်းကပိုကောင်းသည်ကိုသတိရပါ က်ဘ်ဆိုက် (အထူးသဖြင့် cfdisk ကိုသုံးသောအခါ) နှင့်သင်အစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကထည့်သွင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောအခြားဖြန့်ဝေမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထည့်သွင်းမှုသည်အနည်းငယ်သာ (သို့မဟုတ်လုံးဝလုံးဝမရှိပါ) ဖြစ်သည်။
သင်မသုံးခဲ့ပါက ရှေးအကျဆုံး GNU / Linux ဖြန့်ဖြူး သို့သော်၎င်းသည် (၂၃ နှစ်နီးပါးမျှသေးငယ်သောအရာမဟုတ်) ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲ (သို့) ၎င်းကိုသင်အသုံးပြုခဲ့လျှင်၎င်း beta ဗားရှင်းမှရရှိသောသတင်းအားလုံးကိုလက်မလွတ်လိုပါ။ 32 နှင့် / သို့မဟုတ်မှ 64 bits ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Slackware 14.2 ကိုယခု beta ဗားရှင်းတွင်ရနိုင်သည်
ကောင်းတယ် ၂ နှစ်ကျော်ကြာပြီးနောက်ပထမဆုံး Beta ထွက်လာသည်။ ကောင်းသောပက်ထရစ်!
၎င်းသည်တရားဝင်မဟုတ်သော်လည်းဆိုက်ပေါ်တွင်၊ http://alien.slackbook.org/blog/slackware-live-edition-updated/ (Slackware claborators များထဲမှတစ်ခု) Live iso (Plasma5အပါအ ၀ င်ကွဲပြားခြားနားသောစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများရှိသည်) တွင် slackware ရှိသည်။ ၎င်းသည် USB မှတ်ဉာဏ်တွင်အသုံးပြုလျှင်သင်ပြောင်းလဲမှုများကိုသိမ်းဆည်းပြီး၎င်းကိုသင်ဆုံးရှုံးလျှင် "/ home" ကိုပင်စာဝှက်နိုင်သည်။ ။ ဤကြီးမားသောအနှောက်အယှက်များကိုသိရန်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။
အရာအားလုံး fuck ဆိုတဲ့ငါ Boxes ကိုသုံးပါမယ်, ငါ Slack လက်လွတ်။
Gentoo သည် systemd ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းကဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။
Ubuntu ဖြင့်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Matrix